दलित मात्र म रेको होर ? गणेश बुढाको कि रिया गर्दा घरबेटीले निकाली दिए । कति पीड़ा… भिडियो हेर्नुहोस – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Video/दलित मात्र म रेको होर ? गणेश बुढाको कि रिया गर्दा घरबेटीले निकाली दिए । कति पीड़ा… भिडियो हेर्नुहोस
दलित मात्र म रेको होर ? गणेश बुढाको कि रिया गर्दा घरबेटीले निकाली दिए । कति पीड़ा… भिडियो हेर्नुहोस
दलित मात्र म रेको होर ? गणेश बुढाको कि रिया गर्दा घरबेटीले निकाली दिए । कति पीड़ा… भिडियो तलको समाचारको अन्तमा राखिएको छ ।
२ वर्षको बच्चालाई सुई लगाउने बित्तिकै ज्यान गयो, नगर्नुस् भन्दा भन्दै यस्तो गरेका रहेछन् नर्सले भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस